Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Foko sy Fiaviana
Pejy 2 amin_ny 83
14 Janoary 2020
Mpanoratra Melissa Vida · Amerika Latina
Ao Goatemalà, nosamborina araka ny lalàna iray mampisalasala ny vazimba iray mpanora-gazety.
27 Desambra 2019
15 Desambra 2019
Mpanoratra Fernanda Canofre · Amerika Latina
Nanjary fihetseham-po tamin'ny aterineto i Ale Santos tamin'ny fitantarana ireo zava-nitranga mana-tantara sy olo-malaza tsy dia fantatra tao amin'ny Twitter.
06 Desambra 2019
Andao hikarajia Twitter amin'ny #WritingTowardFreedom an'ny Global Voices amin'ny 11 desambra 2019
Mpanoratra Nwachukwu Egbunike · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Ahoana ny mahalasa fandrahonana ny fahalalaham-pitenenana antserasera eto Afrika ny kabary fankahalana foko, ny fahadisoana sy ny fandisoam-baovao, ny fandotoan-drindrina ataon'ny governemanta? Miaraha aminay amin'ity adihevitra ity ao amin'ny karajia Twitter.
28 Novambra 2019
Mpanoratra Fabiola Gutiérrez · Amerika Latina
23 Novambra 2019
Tsy mahavita manitsy ny tsy rariny goavana ny fiekena fa nandray tombontsoa lehibe tamin'ny lamosin'ny andevo tao Antigua ny Harvard ary nanao fanovana an'ohatra vitsivitsy tamin'ny takelaka na ampinga.
Mpanoratra Addy McTague · Azia Atsinanana
04 Novambra 2019
Tranga manantantara iray any Però. Nanohana ny asakaroka tamin'ny fiteny quechua izy.
"Tao anatin'ny 468 taona izao, tsy nisy olona nanoratra ny asakaroka hahazoana dôktôrà amin'ny fitenin-janatany ato amin'ny firenentsika." [...] "Mankasitraka an'i Roxana Quispe nanao izany".
Mey 2020 35 Lahatsoratra